Iinkcukacha ezithe kratya zekhamera yeSamsung ye-S10 engatyhilwanga | I-Androidsis
UNerea Pereira | | Izaziso, Samsung
Kancinci kancinci siya sazi iinkcukacha ezintsha zeflegi elandelayo yenkampani yaseKorea. siyawazi umyinge we Isikrini se-Samsung Galaxy S10, ezi nguqulelo zintathu ziya kuthi zifike kwintengiso kwaye ngoku sineenkcukacha ezintsha malunga ne-cikhamera ye-Samsung Galaxy S10.
Umenzi osekwe eSeoul utyhile nje izisombululo zayo ezintsha ISOCELL Bright GM1 kunye ne-ISOCELL Bright GD1, Iimpawu ezimbini zemifanekiso ezinokudityaniswa kwikhamera ye-Samsung Galaxy S10 ukunika esi siginali imbonakalo yokwenyani yemifanekiso.
Sithetha ngezimbini Izixhobo ezintsha ze-Samsung ezinama-megapixels angama-48 nama-32 ngokulandelelana kwabo banikezela ubungakanani obuncitshiswe ngokwenyani ngokuthelekiswa nezizukulwana zangaphambili zokukhulisa indawo ekhoyo kwiinkampani zaseKorea izixhobo kangangoko kunokwenzeka.
Ikhamera ye-Samsung Galaxy S10 inokuba nee-megapixels ezingama-48 zesisombululo
Sithetha ngefomathi encinci kakhulu enokuvumela ifayile ye Uyilo lweSamsung ye-Samsung S10 unciphe ngaphandle kokuba ulalanise ukuzimela kwayo ngokudibanisa ibhetri encinci. Okanye yintoni ebhetele, evumela ukuba i-3.5 mm jack igcinwe ukuze idibanise ii-headphone eziqhelekileyo.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba i-1 kunye ne-1 megapixel ISOCELL Bright GM48 kunye ne-ISOCELL Bright GD32 sensors ziya kuqala kwimveliso yazo kwiiveki ezimbalwa ezizayo, ke kuyacaca ukuba kungekudala bazakuqala ukubakho kwiifowuni zeSamsung. Nkqu nenkampani ngokwayo ithe kwiinyanga ezizayo siza kubona iiterminal zokuqala ukuba nezi zivamvo zintsha, ke umbono wokuba Ikhamera ye-Samsung Galaxy S10 Nyusa ezi zivamvo zintsha zenza ingqiqo enkulu.
Gcina ukhumbula ukuba umenzi osekwe eSeoul uza kuthatha ithuba intetho esemthethweni ye-Samsung Galaxy S10, ezakubona ukukhanya ngaphakathi kwesakhelo seNkomfa yeHlabathi ye-2019 eza kubanjelwa kwisixeko saseBarcelona kwiveki ephelileyo kaFebruwari kunyaka ozayo, ukubhiyozela isikhumbuzo seminyaka elishumi yosapho lakwaGlass S. ukubethwa kakuhle kwitafile kuya kubonisa isixhobo esineyona khamera intle kwintengiso, ngakumbi emva kwempumelelo ye-P20 kunye nosapho lwe-Mate 20 losapho lwayo olukhulu lweHuawei.
Ukubuyela kwitekhnoloji entsha I-ISOCELL Bright GM1 kunye ne-ISOCELL Bright GD1 sensors Ii-megapixels ezingama-48 nama-32, zithi zinoyilo oluhambelana kodwa azizukuphulukana neenkcukacha kumfanekiso. Enye yeengxaki ezinkulu ngokufota kukuba ubungakanani benzwa bukhulu, kokukhona inokubamba ukukhanya kwaye, ke, ukufezekisa iziphumo ezingcono, ngakumbi kwiindawo ezingakhanyisi kakuhle.
Ukusombulula le ngxaki, inkampani yaseKorea ifake itekhnoloji yokugquma eyayinayo imodeli yangaphambili. Into abayiphumezayo kukuba iipekseli ezincinci ezibekwe kunye zidibanisa ukusebenza kwazo ngenxa Itekhnoloji yeTetracell. Ngale ndlela, iipikseli ezine zisebenza njengepikseli enye, ukufikelela kwi-12 kunye ne-8 ye-megapixel sensors ezinobungakanani bepikseli eyi-1.6 microns.
Ithetha ntoni le nto? lonto Ikhamera ye-Samsung Galaxy S10 iya kuba nesisombululo se-12 megapixels, njengemodeli yangaphambili, kodwa ubungakanani bepikseli buya kunyuka ngokubonakalayo ngetekhnoloji yeTetracell efikelela kwinani leemitha ezi-1.6. Ukongeza, isivamvo se-ISOCELL GD1 sinetekhnoloji yokubonelela ngefuthe le-HDR ngexesha lokwenyani, ukuze sikwazi ukubona uthotho olunoluhlu olunamandla amakhulu, ukufezekisa iindawo ezinoluhlu olunombala ngakumbi.
Sekuyiminyaka sicacile ukuba ii-megapixels zenzwa yokuchaphazela inzwa ayisiyiyo into ebeka icandelo lokufota. Leyo minyaka ihambile xa, ukuphakama kwesisombululo selensi, ngcono iifoto. Sele umvelisi waseKorea iboniswe nge-Samsung Galaxy S9 ukuba iipekseli ayizizo zonke izinto kwaye ngoku ikhamera ye-Samsung Galaxy S10 izama ukubonisa izinto ezimbini: ezinokujongana nawe kuwe I-Huawei Mate 20 Pro kwaye ijolise ukulawula njengeyona fowuni yekhamera intle kwintengiso. Ngaba iya kuphumelela? kwiinyanga ezimbalwa siza kuyazi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Ikhamera ye-Samsung Galaxy S10 ilungiselela ukumangalisa okukhulu
Uwudlala njani umdlalo wabadlali abaninzi kuGoogle ngeHalloween